Maalinta: 13 November 2019
a horeysay ee Turkey ..! Muddada Casriga Taksi wuxuu ka bilaabmayaa Ankara; Duqa Degmadda Ankara Mansur Yavaş, oo sameeyay ballanqaad kale oo doorashada ah, ayaa saxaafadda u soo bandhigay tusaalaha ugu horreeya ee "Mashruuca Cashuur Taksiga" ee ına saxaafadda. Codsiga ugu horeysay ee Turkey [More ...]
Aqoonsiga Shahaadada Gaadiidka Tareenka ee Türk Loydu; Adeegyada qiimaynta la-waafajinta ee Türk Loydu ee loogu talagalay gawaarida tareenka ayaa lagu daray baaxadda Aqoonsiga TS EN ISO / IEC 17065 heerka T byRKAK. Bayaanka Türk Loydu'nun ayaa yidhi [More ...]
Qiima dhimis khidmadaha Baska Dadweynaha ee ardayda Alanya; Alanya, ardaydu waxay bixin doonaan 2.25 halkii ay ka ahaan lahaayeen 1.80. Dowlada hoose ee magaalada Antalya waxay ku kulmey Alanya markii labaad ee gudiga hoosaadka UK UK ee go, aanka ay ka farxisay ardayda Alanya. kulanka [More ...]